SHIRKADDA - AOOD Technology Limited
Waxaan nahay soo saaraha giraanta silsiladda tiknoolajiyadda u janjeedha iyo hal-abuurka ku salaysan.
AOOD TECHNOLOGY LIMITED waxaa la aasaasay sanadkii 2000 si loo naqshadeeyo loona soo saaro siddooyin silsilad ah. Si ka duwan inta badan shirkadaha wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka kale, AOOD waa tiknoolijiyad u janjeerta iyo soo-saaraha giraanta silsiladda ku-saleysan hal-abuurka, waxaan si joogto ah diiradda u saarnay R&D-da xalka sare ee 360 ​​° xallinta isku-xirka wareega ee warshadaha, caafimaadka, difaaca iyo codsiyada badda.
Warshadeena waxay ku taal Shenzhen ee Shiinaha oo ah R&D tiknoolojiyadeed aad u muhiim ah iyo saldhig wax soo saar oo ku yaal Shiinaha. Waxaan si buuxda u isticmaalnaa silsiladda sahayda warshadaha ee horumarsan ee maxalliga ah iyo agab wax-ku-ool ah e si aan macaamiisha ugu gaarsiinno goleyaasha giraanta silsiladda korontada oo tayo sare leh. Waxaan horay u gaarsiinnay in ka badan 10000 shirarka giraanta silsiladda macaamiisha iyo in ka badan 70% ayaa la habeeyay kuwaas oo loogu talagalay shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha. Injineeradeena, shaqaalaha wax soosaarka iyo farsamoyaqaanada shirka ayaa ka go'an inay bixiyaan faraantiyo simbiriirixan oo leh isku halayn aan sax ahayn, sax iyo waxqabad.
Golayaasha Slip Ring
Waxaan nafteena u aragnaa lammaane giraanta silsiladda ah oo si firfircoon u taageera macaamiisha abuurista, hormarinta iyo wax soo saarka alaabta. Intii lagu jiray sanadihii la soo dhaafay, waxaan bixinnaa xarig dhammaystiran oo ah siddooyin caadi ah oo siibitaanno caado ah marka lagu daro bixinta adeegyo injineernimo xiriirinta sibidhka oo dhammaystiran oo ay ku jiraan naqshadeynta, jilidda, wax soo saarka, isu imaatinka iyo tijaabinta. Wada -hawlgalayaasha AOOD waxay daboolayaan codsiyo kala duwan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin baabuurta gaashaaman, gawaarida anteeno go'an ama guur -guura, ROV -yada, baabuurta dab -damiska, tamarta dabaysha, otomaatiga warshadda, robots -ka nadiifinta guriga, CCTV, miisaska rogidda iyo wixii la mid ah. AOOD waxay ku faantaa inay bixiso adeeg macmiil oo aad u fiican iyo xalal shirka giraanta sibidhka.
Warshadeenu waxay ku qalabeysaa wax soo saarka horumarsan iyo qalabka tijaabada oo ay ku jiraan mashiinka wax lagu durayo, lathe, mashiinka wax lagu shiido, tijaabiyaha isku dhafka ah ee giraanta sibidhka, koronto -dhaliyaha signalada soo noqnoqda, oscilloscope, tijaabiyaha isku -dhafan ee encoder, mitir torque, nidaamka tijaabinta iska -caabbinta firfircoon, tijaabiyaha iska -caabbinta daboolista, dielectric tijaabiyaha xoogga, falanqeeyaha signalada iyo nidaamka tijaabada nolosha. Intaa waxaa sii dheer, waxaan leenahay xarun mashiinno CNC oo gooni ah iyo aqoon -isweydaarsi wax -soo -saar nadiif ah si loo soo saaro shuruudo gaar ah ama cutubyada giraanta silsiladda caadiga ah ee milatariga.
AOOD waxay had iyo jeer diiradda saareysaa sidii loo horumarin lahaa xalka xiriirka cusub ee siibashada iyo si loo daboolo baahida sii kordheysa ee codsiyada cusub. Weydiimo kasta oo la habeeyey waa la soo dhaweynayaa.